Somaliland: “Maanta Waxa Inoo Samaysan Dawlad Gofaneyaal Ah, Shacabkuna Yihiin Sida Shilin Engegtay Oo Kale..” Faysal Cali Waraabe - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Maanta Waxa Inoo Samaysan Dawlad Gofaneyaal Ah, Shacabkuna Yihiin Sida Shilin...
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, Ahna Musharraxa Madaxweynaha ee Xisbigaas Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay Xaaladda Dalka iyo Arrimo kale oo nolosha Shacabka khuseeya.
Faysal oo Shalay booqasho ku tagay Magaalada Gabiley, ayaa sheegay in loo baahan yahay in Dalku ka gudbo Qabyaaladda isla-markaana Qof walba uu wax lagu siiyo Aqoontiisa iyo kartidiisa.
Faysal oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Maanta waxa inoo samaysan Dawlad iyo Dad ay inyar oo Gofaneyaal ahi ka nool yihiin, inta kalena tahay Shilin engegtay. Annagu waxaanu doonaynaa inaanu dhisno Somaliland midaysan, oo Sharciga u midaysan, oo Qof kastaba Aqoonsiitiisa wax lagu siinayo, Waayo? Dhallinyarada halkaa taagani haddayna Qaran helin, haddayna Dawlad helin, yaraanta ayay ku dhiman doonaan, Maanta halkaa ayay wada taagan yihiin, waa Saacadihii la shaqeynayey, waxay ahayd in Qof walba uu Xafiis fadhiyo, oo Beeraha la qoto oo Warshadaha laga shaqeeyo, laakiin Imika Suuqa ayaa sidaa loo taagan yahay, Hoonka Gaadhiga Qaadka ayaa la sugayaa, reer Somaliland waxay noqdeen sidii Riyaha Dhaameelka sugayey.”
Faysal waxa kale oo uu ka digay in Qabyaalad lagu ololeeyo, “Rag waxa jira odhanaya Tollaay, yaa Sacad Muuse ah, Tollaay yaa Habar Yoonis ah, adeer waxaasi socon maayaan. Hadday Qabyaalad noqoto Anigana Inantii baa i dhashay, Muuse-na Inantii baa dhashay, Riximkuna wuxuu yaallaa Xagga hooyada..” ayuu yidhi